Teknolojia · Septambra, 2011 · Global Voices teny Malagasy
Teknolojia · Septambra, 2011
Tantara mikasika ny Teknolojia tamin'ny Septambra, 2011
Goatemalà: Manaraka ny Fifidianana Amin'ny Ankapobeny
Amerika Latina 19 Septambra 2011
Androany, [11 Septembra 2011], no handeha hifidy filoham-paritra, ben'ny tanàna, solombavahoaka ary filoham-pirenena ny olom-pirenena Goatemalteka . An-jatony ireo niasa vao maraimbe mba hametraka demokrasia tena izy. Na dia tsy afaka mifidy aza ireo Gotemalteka monina any ivelany, vahoaka an-jatony manerana izao tontolo izao no manaraka akaiky ny zava-miseho amin'ny...
Zambia: Fampielezan-kevitra An-tserasera Ataon'ny Antoko Politika
Afrika Mainty 15 Septambra 2011
Roa herinandro latsaka mialoha ny hifidianana amin'ny 20 Septembra 2011, nanatontosa fampielezan-kevitra amin'ny fomba hafa tsy toy ny mahazatra amin'ny fampiasana afisy, dokambarotra amin'ny fahitalavitra, na feonkira amin'ny radio intsony ireo antoko politika, fa sehatra vaovao indray izao no ampiasan'izy ireo—ny tranonkala. Enina amin'ireo antolo folo nirotsaka kandidà ho filoham-pirenena no...
Azia Afovoany sy Kaokazy 14 Septambra 2011
Hisy fifidianana Filoham-pirenena ilay firenena kely nalaza tamin'ny rotaka politika amin'ny volana Oktobra 2011. Ankehitriny dia manam-bintana halaza amin'ny zavatra hafa indray i Kyrgyzstan: mpizaka zom-pirenena Kyrgyz 83 no nisoratra anarana hifaninana hameno ny banga amin'ny sezan'ny Filoha. Mahavalalanina ihany ny lisitry ny kandidà. Misy ny mpahay lalàna, tantsaha, mpandraharaha,...